LG G2 VS Xiaomi Mi4c | Androidsis ပါ
Francisco Ruiz | | LG, Xiaomi က
ကျနော်တို့ဒီအသစ်အသုတ်နှင့်အတူဆက်လက် Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုဤအမှု၌ရင်ဆိုင်နေရသည် LG G2 နှင့် Xiaomi Mi4cအချို့သောအလွန်ကြီးမားသည့် Android ဆိပ်ကမ်းများကိုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ခွဲထားသည် Xiaomi Mi4c ၎င်းကိုလွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကတင်ပြခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်လ် LG G2 ကိုလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကျော်ကတင်ပြခဲ့သည်။
ဘယ်လိုအမြဲဒီ၌တည်၏ Androidsis ပုံမှန်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုမည်သည့် terminal သည်အခြားတစ်ခုထက်ပိုကောင်းသည်ကိုကြေငြာခြင်းသို့မဟုတ်အမြန်ဆုံး terminal ကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့မကြေငြာလိုပါ။ ဤအမြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှုသည် Android terminal အသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည့် Androidsis စာဖတ်သူကိုသာရည်ရွယ်ပြီးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်တွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိမရှိကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်သိလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာ Androidsis မှာငါတို့နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတာတွေအထူးသဖြင့်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ applications တွေထဲမှာမင်းကိုမြင်စေချင်တယ်။ ဤနေရာတွင်ကြုံတွေ့ရသောဆိပ်ကမ်းများအကြားကွာခြားချက်မှာသိပ်မကွာလှပါတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိမ့်ကျသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များရှိသည့် terminal တစ်ခုသည်သာလွန်သော terminal ကိုကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုကဲ့သို့သောအံ့အားသင့်စရာများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ မပါလျှင်ကြည့်ရှုပါ ကျနော်တို့ LG G2 VS ကို LG G3 ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု.
1 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ LG G2 VS Xiaomi Mi4c
2 LG G2 VS Xiaomi Mi4c Speed ​​Test နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ LG G2 VS Xiaomi Mi4c
အမှတ် LG Xiaomi က
ပုံစံ G2 D802 Mi4c
operating system ကို အန်းဒရွိုက် 5.0.2 အန်းဒရွိုက် 5.1.1
ဖန်သားပြင် 5'2 "IPS5"IPS
resolution ကို FHD FHD
Processor ကို Snapdragon 800 Quadcore 2'2 Ghz မှာ 808 Ghz တွင် Snapdragon 1 Hexacore
ရမ်2Gb2Gb
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 16 Gb 16 Gb
microSD ကဒ်များ သူတို့ကိုခွင့်မပြုဘူး မထောက်ပံ့ပါ
ရှေ့ကင်မရာ2mpx5mpx
နောက်ကင်မရာ ၁၃ mpx 13 mpx
အလေးချိန် 143 ဂရမ် 126 ဂရမ်
ဘက်ထရီ ဖြုတ်တပ်။ မရသော 3000 mAh ဖြုတ်တပ်။ မရသော 3000 mAh
စြေး 250 ယူရိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်။ ယူရို ၄၇၅
LG G2 VS Xiaomi Mi4c Speed ​​Test နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်
Application များကိုကွပ်ကဲချိန်၌ဤဆောင်းပါးကို ဦး ဆောင်သည့်ဗီဒီယိုစစ်ဆေးမှုတွင်သင်မည်မျှကောင်းစွာစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သနည်း။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများနှင့်နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသောအရာများဖြစ်သည်။ သင်ကွာခြားချက်ကိုသတိထားမိ Hexa core terminal တစ်ခုအကြား၊ core ၆ ခုပါသော Quad core ပရိုဆက်ဆာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသို့မဟုတ် cores လေးခု၌ cores ၂ ခုထက်နည်းသော cores နှစ်ခုရှိသည်။ Processor နှစ်ခုစလုံး၏အမြန်နှုန်းသည်ကွဲပြားသော်လည်း LG G2 တွင် quad-core ပရိုဆက်ဆာရှိသော်လည်း၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း 2,2 Ghz ရှိပြီး Hexa ပရိုဆက်ဆာရရှိသော ၁.၈ Ghz အမြန်နှုန်းထက်ကျော်လွန်သည်။ Mi1,8c ၏ core ။ ၎င်းကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုကို ပို၍ ပင်အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်သည်ထက်ပိုသည် LG က G2နှစ်နှစ်ရှိပြီးတဲ့ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု၊ အချိန်တိုင်း Xiaomi Mi4c ကိုရင်ဆိုင်ပါ Xiaomi ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခုကလျှောက်ထားမယ် AnTuTu စမ်းသပ်မှုရလဒ်ကိုကြိုတင်တွက်ချက်နိုင်ခြင်းကြောင့်မည်သည့် terminal သည်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရရှိသည်ကိုစစ်ဆေးရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပြုသော်လည်း၎င်းနှစ်ခုစလုံး၏အဓိကဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကိုစမ်းသပ်ပြီးမည်သည့်စက်ကိရိယာများကိုစမ်းသပ်ကြောင်းတောင်းဆိုသည့်စမ်းသပ်မှုကိုခံလိုက်ရသည့် terminal နှစ်ခုစလုံးသည်၎င်းတို့ကိုယ်ကိုမည်သို့ကာကွယ်ကြောင်းကြည့်ရှုရန်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ အချိန်ကွာခြားချက်တစ်ခုက၎င်းကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့အချိန်ယူရပါတယ်။ ယုတ္တိနည်းဖြင့် စမ်းသပ်မှု၏ဤအပိုင်း Mi4c သည်လမ်းပေါ်တွင်အနိုင်ရရှိသည်.
နောက်ဆုံး Androidsis အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုတွင်စမ်းသပ်မှုအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသည် Terminal နှစ်ခုလုံး၏ Wi-Fi connection မြန်နှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးသည်ဆော့ဖ်ဝဲနှစ်ခုစလုံးတွင်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းတို့ပါဝင်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ LG က G2 ကိုနိုင်ငံတကာ D802 ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု - LG G2 VS Xiaomi Mi4c
မင်္ဂလာပါ marquistas! ဟုသူကပြောသည်
#LOLLiPOP ပါသော # LGG2 မြည်းနှင့်တူ၏။ #androidmarshmallow6သို့မဟုတ် #Cyanogen ကိုထည့်သွင်းရန်ပြင်ဆင်မှုကိုစောင့်နေသည်။
Hola marquistas သို့ပြန်သွားပါ!
David Vidal Guirao ဟုသူကပြောသည်
Xiaomi mi4c မှာမင်း Android stock ကို install လုပ်ထားပြီလား။ သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ROM (ကင်မရာ၊ ဘက်ထရီစသည်ဖြင့်) ရှိပါသလား။
David Vidal Guirao သို့ပြန်ပြောပါ
mi4c သည်အလယ်အလတ်တန်းစားရှိပြီး hexa core မရှိပါ။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က high-end ထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားသင့်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ Snapdragon 808 တွင် dual-cores သည် 1.8ghz နှင့် ၄ cores သည် 4ghz တွင်ရှိသည်။ LG G1.4 တွင်2မှ4ghz ရှိသော်လည်း
အကယ်၍ မာလ်တီမီဒီယာသဘောအရဆိုလျှင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး၊ အမြန်နှုန်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကွန်ပျူတာကိုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်အလွန်များပြားသောဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်စရာမလိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကင်မရာနှင့်မျက်နှာပြင်အကြောင်းပြောဆိုရန်ပိုမိုအကြောင်းပြနိုင်စရာအကြောင်းရှိသည်။ တကယ်သိသာနှစ်နှစ်ကွာခြားချက်ရှိလျှင်